Ciidamada DF-Somalia iyo Ahlu-Sunah oo Howlgalo Deg deg ah ka Bilaabay Dhuusamareeb - Nabad iyo Nolol
Ciidamada DF-Somalia iyo Ahlu-Sunah oo Howlgalo Deg deg ah ka Bilaabay Dhuusamareeb
Wararka laga helayo ayaa Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ay sheegayaan in Jugta qarax labaad laga maqlay gudaha Magaaladaas,kaasi oo la sheegay inuu ahaa mid ay qarxiyeen Ciidamada amniga.
Dadka goob joogayaal ah ayaa soo sheegaya in qaraxaas uu ahaa miino ay qarxiyeen Ciidamada amniga,isla markaana aysan jirin cid wax ku noqotay.
Sidoo kale Ciidamada amniga dowlad Goboloeedka Galmudug iyo kuwa Ilaalada gaarka ah Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa ay baaritaano kala duwan ka wadaan Dhuusamareeb,iyagoona gacanta ku dhigay dad u badan dhalinyaro.
Qaraxii hore ayaa ka dhacay afaafka hore ee Xarunta INJI ee uu ku shaqeeyo madaxa Xukuumadda Galmudug Sh. Maxamed Shaakir, Waxaana ku dhintay is miidaamiyihii sidoo kalana waxaa ka dhashay Dhaawacyo Fudud.
Waxaa jirto cabsi weyn oo ku aadan inay Magaalada Dhuusamareeb ku jiraan dad kale oo is qarxin rabo sida ay sheegeen hey,adaha Ammaanka waana sababta keentay in halkaas laga bilaabo baadhitaano deg deg ah
The post Ciidamada DF-Somalia iyo Ahlu-Sunah oo Howlgalo Deg deg ah ka Bilaabay Dhuusamareeb appeared first on Allgalgaduud.Com.
Maamulka KGS oo Diyaarinayo 400 askari oo Ka Howlgala Muqdisho & Baydhabo
Faah Faahin Qaraxa Dhuusamareeb iyo Khasaaraha ka dhashay